भारतमा भइरहेको चुनावलाई नेपालले कसरी लिने ? – My A1 News
भारतमा भइरहेको चुनावलाई नेपालले कसरी लिने ?
बुधबार, बैशाख २५, २०७६ May 8, 2019 एवान न्युजLeaveaComment on भारतमा भइरहेको चुनावलाई नेपालले कसरी लिने ?
भारतमा अहिले भइरहेको आम चुनाव सरकार परिवर्तनका लागि मात्र नभएर भारतको राजनीतिक र दार्शनिक दिशा निर्देशको लागि पनि निर्णायक रहेको छ । यो चुनावमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रतिस्पर्धीहरु देखिएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको रुपमा एउटै उम्मेदवार मोदी हुन् । भारतीय जनता पार्टी प्रधानमन्त्री मोदीको नाममा चुनाव लडिरहेको छ । यसरी नेहरु र इन्दिरा गान्धीपछि भारतको राजनीति एउटा राष्ट्रिय नेताको छत्रछायामा भएको छ ।
पाँचवर्ष अगाडि भारतमा सरकार परिवर्तन भएको मात्र थिएन, भारतको राजनीतिको मूल आधार पनि परिवर्तन भएको थियो । भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनदेखि निरन्तर रुपमा राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस पार्टी संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतपनि गुमाएर कमजोर भएको थियो । यसपालिको चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पक्षमा अमेरिका र चीन दुवैले मतदान गरेका छन् ।
विगत दुई दशकदेखि पाकिस्तानका नागरिक मसूद अजहरलाई आतंककारी घोषणा गर्न भारतले पहल गरेको थियो । सन् १९९९मा काठमाडौंबाट उडेको भारतीय विमान अपहरण र सन् २००८ को मुम्बई आक्रमणको नाइके अजहरलाई आतंककारी घोषणा गराउने प्रयासमा भारतीय कुटनीति विगत दुई दशकदेखि सक्रिय थियो । तर, चीनको अड्कोले सफल हुन सकेको थिएन । अहिले चुनावकोे अन्तिम प्रक्रिया चलिरहेको बेलामा चीनले साथ दिएपछि संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्बाट अजहर आतंककारी घोषित भएको छ । यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कुटनीतिक सफलता हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको बीचमा विश्वासको सम्बन्ध बलियो भइरहेको प्रमाणका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । यसैगरी, एशियाली सामरिक रचनामा भारतलाई मियोको रुपमा स्वीकार गरेर अमेरिकाले मोदीको कुटनीतिक हैसियत स्वीकार गरेको छ ।
यसरी यो चुनावमा अमेरिका र चीन दुवैले मोदीलाई साथ दिएका छन् ।
भारतीय राजनीतिको मानसिक दिशा र परिवर्तन नेपालले बुझ्न सकेको छैन । मोदीको ५ वर्षको कार्यकाल नेपालले साबिक बमोजिमको व्यवहारद्वारा खेर फाल्यो । अहिले भारतीय जनता पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेखित दिशा निर्देशलाई नेपालले बुझ्न सकेको देखिँदैन । मूलतः यो चुनावी घोषणापत्रमा नेपालको दृष्टिबाट दुईवटा पक्ष छन् ।
पहिलो, भारत हिन्दू राष्ट्रवादको विशेषतालाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएर अघि बढ्न खोजेको छ । नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय संस्कृति, धर्म, संस्कार र परम्परालाई बिर्सेर हिंडिरहेको छ । भारत हिन्दु राष्ट्रवादलाई प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा आगामी ५ वर्ष भारतीय संस्कृति र हिन्दु संस्कृतिलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्दैछ । नेपाल अहिले परिभाषित हुन नसकेको धर्म निरपेक्षतालाई बोकेर हिंड्ने प्रयासमा छ । दोस्रो कुरा भारत राष्ट्रवादबाट अगाडि बढिरहेको छ । यसैगरी अमेरिका र चीनपनि राष्ट्रवादबाट निर्देशित रहेका छन् । तर, नेपाली राष्ट्रवाद निरन्तर कमजोर भएर गएको छ ।
चुनावपछिको भारत नेपालका लागि अवसर र चुनौति दुवै हुनेछ । विश्व राजनीतिमा बढ्दै गएको भारतीय प्रभावले नेपालको लागि नयाँ अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
नेपाल राजनीतिक स्थायित्व, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुलाई जीवन्त बनाएर तथा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाहरुलाई सक्रिय तुल्याएर शक्ति पृथकीकरणको प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई पालना गरेर अगाडि बढ्न सके भविश्य सुखद् हुनेछ ।
अन्यथा, अहिले नेपालमा भइरहेको छैठौं संवैधानिक अभ्यासपनि बिथोलिने र नेपाल एकचोटी फेरि अस्थिरताको बाटोमा धकेलिनेछ । यसक्रममा विगत र भविश्यमा फरक हुन सक्नेछ । विगतमा एउटा मात्रै विदेशी शक्ति नेपालमा सक्रिय थियो । अहिले भारत, चीन र अमेरिका समेत तीन शक्तिको सामाजिक राडारभित्र नेपाल परिसकेको छ । यी तीन वटा शक्तिहरुको चाहनालाई सन्तुलन मिलाउन नसके नेपाल विवादको तातो भुँमरीमा फस्नेछ ।
(पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीपाण्डेसँग बाह्रखरीको कुराकानीमा आधारित–तस्बिर पाण्डेको फेसबुकबाट)
यो सामग्री १२ खरी डटकमवाट साभार गरिएको हो ।
बालुवाटारको २५ रोपनी जग्गा ‘भूमाफिया’ भनेर आरोप लागेका तीन परिवारको
आजदेखि काङ्ग्रेसको जागरण अभियान सुरु
सूचनाको संसारमा नयाँ आयाम
आईतवार, भाद्र ४, २०७४ August 26, 2017 एवान न्युज
मन्त्रिपरिषदको निर्णय लुकाउने असफल प्रयास : ओली सरकारको डर कि खोटो नियत ?
सोमबार, कार्तिक २६, २०७५ एवान न्युज
प्रेस तथा मानवधिकार कुण्ठित हुने विधेयक पास हुन नदिने देउवाको दावी
शनिबार, जेष्ठ ४, २०७६ एवान न्युज